Shiinaha Qalabka Fududeynta Qalabka Qalabka iyo Qalabka Dhejinta - Soosaarayaasha - Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga Co., Ltd
Hoyga >Alaabta >Qaybaha qalabka guryaha caaga ah>Ku xirnaanta alaabta guriga iyo qalabka dhejinta
Caaga Ku marooji Cap Qurxinta Ku marooji Cover Cover
Su'aal: 1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah Haa, waxaan soo saare ka nahay Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeenu waxay ku taal Gobolka Guangdong. 2. Sideen ku booqan karaa wershadaada? Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddaad qorsheyneyso inaad booqato. Waxaan ku tusi karnaa jidka ama waxaan kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha. 3. Ma bixisaa shaybaarro bilaash ah?
Miiska sanduuqa siligga
Dhaqe caaga ah
Taageerada qaansada caaga
Nooca koorsada isku haysa fiilada balaastigga ah
Tilmaamaha Raadinta Khaanadda Caaga